Hiran State - News: M/weynaha Hiiraan State oo soo dhisay xukumad tayo leh
M/weynaha Hiiraan State oo soo dhisay xukumad tayo leh
Jimco 7,Janaayo 2011 (HSOL) shir jaraa'id oo uu maanta ku qabtay magaalada Mogdishu m/weynaha Hiiraan State Dr Mohamud Abdi Gaab ayuu ku soo magacaabay xukumad tayo leh oo u badan aqoonyahano iyo saraakiil qibrad u leh xilalka loo magacaabay.
Madaxweynaha ayaa soo dhisay xukumad tayo leh oo 65% yahiin qurbo joog. arintaan ayaa waxaa aad u soo dhaweeyey shacabka reer Hiiraan kuwooda ku sugan gudaha iyo dibada. dalka Somaliya oo ahaa dal ay ka taagneed colaad 20 jirsatay ayaa hada waxaa dib ugu laabanayo qurba joogta si ay qeyb uga noqdaan dib u dhiska dalka. dowlad goboleedkani maanta golahisa wasiirada lagu dhawaaqay ayaa waxaa ka dhax muuqda shaqsiyaad aad looga yaqaano gudaha Hiiraan iyo dibadaba kuwaas oo mudo gaaban gudaheed ka howl gali doona gudaha Hiiraan.
Qurba joogta Somaliyeed waxey kaalin weyn ka qaadan karaan dib u dejinta dalka maadama ay iyagu yahiin kuwa lagu tiirsan yahay ee shacabka gudaha gacanta ku haya dhinackasta marka laga eego, weyna u sahlan tahay sidii ay uga dhadhicin lahayeen walaalahooda ku nool gudaha sidii ay ula shaqeyn lahaayeen dowlad goboleedkani cusub.
Waxaa ilaa maanta iska soo daba dhacayo hambalyada loo dirayo xukumadani cusub ee uu maanta soo magacaabay madaxweynaha Hiiraan State.ka sokow golaha wasiirada waxaa isagane maanta loo magacaabay madaxweyne ku xigeenka Hiiraan State oo lagu bedelay madaxweyne xigeenkii hore ee HS col Muqtaar Iimaan cabdulle (Macalin Fanax).
Dowlada federalka Somaliya iyo dowlad goboleedka Hiiraan State ayaa ilaa hada dadka hogaaminayo amaba xilal ka haya yahiin 65% qurbo joog taasi oo hadii dalka intiisa kale Somali da degana ku daydaan in dib u laabtaan qurbo joogta si dalka iyo dadka loo badbaadiyo.
Waxaa hore ay qurba joogtoodu dib ugu laabteen dalka siiba kuwooda ka soo jeeda Somaliland iyo Puntland oo ah iyagu kuwa udub dhaxaadka u ah jiritaanka maamuladaas hadane waxaa qorshahu yahay qurba joogta koofurta Somaliya sidii ay dib ugu laaban lahaayeen taas oo bulshada Soamliyeed guul u ah.
M/weynaha Hiiraan State ayaa walita soo wado magacaabida jagooyin muhiim ah sida taliyaha Police-ka wasiiro ku xigeeno, gudoomiyaha bank iyo gudoomiyeyaasha gobolada iyo degmooyinka Hiiraan State. marka laga soo tago magacaabida madaxweynaha Hiiran magacaabay xukumadiisa waxaa loo daayeye golaha baarlaamnka dowlad goboleedka iyo golaha dhaqanka intuba iney soo xushaan qabiilada reer Hiiraan.
Golaha baarlamaanka dowlad goboleedka ayaa waxuu ka koobnaan doonaa 65 halka golaha dhaqankuna noqon doono 63. durbaba waxaa gudaha Hiiraan ka bilaawday loolan ku aadan sidii shaqsiyad si weyn looga yaqano Hiiraan ay ula wareegi lahaayeen maamulka guud ilaa heer gobol amaba degmo sida qorshuhu yahay.
Reer hiiraan ayaad moodaa iney 2 dii sano ee ugu danbeysay la soo baxeen fir fircooni ay ku doonayaan sidii ay isbedel dhinaca siyaasada ah ugu sameyn lahaayeen Hiiraann State iyo guud ahan Somaliya. waxaana hada jidka ku soo jiro aqoonyahan reer Hiiraan ah oo buuxin doono dhawaantan booskii iyo kartidii ay ka tageen madaxweynahii hore ee Somaliya iyo Siyaasigii rug cadaaga ahaa ee Shiikh Ali jimcaale. Somaida u dhuun daloosha arimaha siyaasada ayaa ku nuux nuuxsaday in muwaadin reer Hiiraan ah uu dalka dejin doono mustaqbalka taas oo lagu micneeyey in reer Hiiraan yahiin umad aan dagaal iyo colaad looga rajo qabin iney ka huriyaan degaano kale oo Somaliyeed maadama ay degaanadooda ku filan yahiin waxkastana ku heystaan.
· admin on January 07 2011 17:23:20 · 0 Comments · 2247 Reads ·
14,605,576 unique visits